Shirkii dowladda dhexe & DG oo toddobaadkan furmaya | KEYDMEDIA ONLINE
Shirkii dowladda dhexe & DG oo toddobaadkan furmaya
Sida ay noo xaqiijiyeen ilo lagu kalsoonaan karo waxaa lagu wadaa in toddobaadkan magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo shirkii madaxda dowladda dhexe, dowladg goboleeyada iyo gobolka Benaadir.
MUQDISHO, Soomaaliya - Shirkii u dhaxeeyay madaxda Dowladda dhexe, Dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Benaadir ayaa lagu wadaa in todobaadkan uu ka dhaco magaalada Muqdisho, iyadoo shirkaas ay fududeynayaan Safaaradda Mareykanka iyo Xafiiska Qaramada Midoobey ee Soomaaliya.
Shirkan waxa uu ka dhici doona Teendhada Afisyooni oo aheyd halkii ay ka dhacday doorashadee 8 Febaraayo ee lagu doortay madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday ee Farmaajo, iyadoo ay muuqato in qodobkii ahaa in meel ammaan ah uu ka dhaco shirka ee ay soo jeediyeen dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland laga jawaabayo ayaa halkan la isugu yeeray madaxda muranku ka dhaxeeyo ee doorashooyinka isku haya.
Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland ayaa Muqdisho imaanaya maalmaha nagu soo aaddan, waxaana degaan looga diyaariyay xeyndaabka Garoonka diyaaradaha ee ay ilaaliyaan Ciidamada nabad ilaalinta ee AMISOM.
Maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa horay ugu xiray shuruudo ka qeyb galka shirka lagu dhammeynayo arrimaha doorashooyinka ee muranka xoogani ka taagnaa tan goortii ay soo billowdeen wada-hadallada la xiriira arrimahan.
Dowladda Federaalka ayaa dooneysa in shirka uu kaliya noqdo Xaflad saxiix ah qodobadii xalka looga gaaray ee Shirkii Guddiga Farsamada Baydhabo, halka Dowlad Goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay saddex qodob oo shuruud ah soo bandhigeen kuwaasoo kala ahaa:
in Madaxweyne Farmaajo saxiixo warqada xil gaarsiinta
In wixii sharciyad ah ee la ansixiyay kaddib 27 -kii December laga laabto iyo
Amniga Doorashooyinka laga hadlo kaddib wixii dhacay 19 -kii Febaraayo.
Guud ahaan qodobada ku hor gudban in uu mira dhalo shirka lagu saxiixayo arrimaha la xiriira doorashooyinka waa kuwo ka imaanaya dhinaca madaxweyne Farmaajo iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, iyadoo inta soo hartayna ay u muuqdaan kuwo kor-joogto ah, talo iyo miisaan xoog lehna aan ku laheen waxyaabaha la isku hayo ee doorashooyinka la xiriira.